Ulale ngesonto. Isonto liphupha ngani?
Ephusheni ibandla lazibona: yini okufanele lindelwe?
Kusho ukuthini ukuphupha ngesonto? Amaphupho mayelana nesonto.
Yini esivame ukuzihlanganisa nesonto? Ngokuqinisekile ngenjabulo, ukuhlanzeka kwemicabango nesizathu, izinhloso ezinhle nokuhlawulelwa kwezono. Ukubona ithempeli ephusheni lihunyushwa ngokuhlukile, kuye ngokuthi isimo sakhiwo, ukuhlobisa okungenalutho noma okugcwele, imihlobiso kanye nemizwa yakho ephusheni. Ukuhumusha okuyisisekelo kunazo zonke zokulala kungukuphenduka okubukhali ekupheleni kwesiphupho, ukuqala kokuphila okusha. Mhlawumbe, uzoshintsha kakhulu umbono wakho nesimo sengqondo kubantu abazungezile.
Amaphupho anjalo ayingqayizivele, kepha, njengombuso, anamandla amakhulu. Ngenkcazelo eningiliziwe yalokho ibandla elikulo, ungabona ngezansi.
Umhlobiso omuhle wekhanda wekhanda wezakhiwo ezinhle, uthi iningi lezinyanga ezintathu lizoba nempilo ejabulisayo neyodwa. Umkhulelwe uzoba ngokoqobo, umndeni uzoba nokuqonda okuphelele nokuvumelana.
Kodwa-ke, uma ephusheni lakho ubona igumbi elibi elingenalutho lethempeli, khona-ke umbono onjalo uthembisa usizi nokugula. Akukho lutho empilweni yakho oluzokuthokozisa maduzane. Ukuthi iphupho aliqali ukwenza - funda umkhuleko wokubonga eNkosini uNkulunkulu.
Ukuphupha isonto elingenalutho
Iphupho elinjalo liphathwa ngezindlela ezahlukene. Amanye amabhuku okuphupha abonisa ukuthi isonto elingenalutho liwuphawu lobubuthakathaka nobumpofu. Kodwa abahlaziyi abaningi bathi leli phupho liwuphawu lomphefumulo ohlanzekile nezinhloso ezinhle zephupho.
Yiziphi izithombe namakhandlela
Isici esibalulekile kukhona nezithombe ezivezwe kwizithonjana. Uma bathunjwa ngenjabulo nokuqiniswa - lokhu kusho ukuthi esikhathini esizayo esiseduze lo mphupho ngeke abe nezinkinga nezinkinga. I-iconostasis engcolile noma ephukile ibhekwa njengesibonakaliso esibi, esibonisa ukudumazeka empilweni nokuntula injabulo kuso. Ukubona ephusheni inqwaba yamakhandlela avuthayo kusho ukuthi iyovikeleka ekuguleni nasehlweni elibi. Ukukhanyisa ikhandlela kwenye - uphawu lokusiza nosizo, kusho ukuthi esikhathini esifushane uzothola umuntu oyosiza ukuxazulula inkinga yakho.
Ubaba uphupha ngani?
Iphupho lapho ubona khona umpristi uthembisa ukuthula, ukuchuma nempilo empilweni yakho. Lokhu kuthathwa njengesibonakaliso esihle, ngoba noma yisiphi isithombe somuntu olungileyo sibonisa ushintsho ngcono. Uma ubaba ophupho ehlezi emkhosini we-festive - impumelelo kunoma yiluphi uhlobo lwezinyathelo ezinhle.
Uma ephusheni awuboni kuphela isonto, kodwa futhi uhambele ezinye izinzwa, sincoma ukuthi uyinake.
Ukuze ulalele umculo wezinsimbi ephusheni kusho izindaba ezinhle. Mhlawumbe uzoba nomhlangano ojabulisayo. Uma lokhu kubonakala sengathi intombazane engashadile, ngokushesha ungalindela isipho sokushada.
Ukuzwa iphunga lempepho ephusheni liwuphawu oluhle, olukhombisa ukuthula kwengqondo nokuhlanzwa kwensimu yamandla wephupho. Ezinye izimpendulo zephupho ziphatha lokhu njengokuqeda izono.
Bheka abafakizicelo esontweni - ukuchuma ukheshi. Esikhathini esizayo esiseduze uzokwazi ukukhokha zonke izikweletu futhi uthuthukise isimo sakho sezezimali. Ukulala kuzothola amandla angaphezulu uma unikeza omunye usizo phakathi kwezinsuku ezintathu.
Ukuthandaza ephusheni kuyisibonakaliso sokuthi umphefumulo ufuna ukukhuluma noNkulunkulu futhi wenza ngokulala. Ungakhohlwa ukunikeza isikhathi somthandazo empilweni yangempela.
Njengoba ungabona, isonto ngokuvamile liphupha ngokuthile okukhanyayo nokuhle. Lona yindawo engcwele, ngakho-ke ubone ithempeli nakho konke okuhlobene nalo, uthembisa injabulo empilweni yakho. Iphupho mayelana nesonto lithi uhlala ngokuvumelana nawe nabanye. Usukho endleleni efanele, ungacimi!
Indlela yesimanje ekuchazeni iphupho
Kungani inja efile iphupha?
Yini iphupho eliphupha ngayo?
Inyoka ibambe ngephupho, kuyini?
Ukuphoqa amanzi kusuka ephahleni: incazelo ephakeme kunazo zonke yezincwadi zephupho
Uma umuntu ofanayo ephupha, kusho ukuthini?
Zibone ngokwakho esibukweni: incazelo yezincwadi zephupho
Ubhontshisi obusiwe ne-sage
Ukuzwa ukukhathazeka ezinganeni kanye nezindlela zokulungiswa kwazo
Ukudla okumnandi nsuku zonke
UGosha Kutsenko uziqhenya ngencwadi ethi "iseluleko esiyingozi" kubantu abadala, isithombe
Ukuhlanganiswa komuthi womndeni wezizukulwane
Ukupheka okunomsoco kwezitsha ezivela ezinkukhu zesisu
Amaski wemvelo kuwo wonke izinhlobo zesikhumba
Ngubani owesifazane ongasebenza emkhunjini
Amazambane anemayonnaise yeminint
Ukubona okuyimpumputhe, emva kwalokho imizwa emihle kuphela eyohlala
Indlela yokwakha ubudlelwane nobaba ophuthumayo
Indlela yokufundisa intsha ukuba ilande?
Ama-latkes amazambane nezinqathe